Tag: fanairana sosialy | Martech Zone
Tag: fanairana sosialy
Drafitra sosialy: ny kalandrie media sosialy sy ny sehatry ny famoahana anao
Zoma, Febroary 13, 2015 Talata, May 12, 2015 Douglas Karr
Mahafinaritra ny mahita ny fitohizan'ny sehatra media sosialy mihena amin'ny vidiny ary azon'ny tompona orinasa antonony. Ny socialdraft dia manomboka amin'ny $ 29 isam-bolana fotsiny ho an'ireo fiasa izay an-jatony na an'arivony dolara vao taona vitsy lasa izay. Ny sehatr'izy ireo dia $ 59 isam-bolana ary ny kaontin'ny Enterprise dia $ 99 fotsiny. Ny kaonty rehetra dia miaraka amina fanohananana sy lafin-javatra iray taonina. Miaraka amin'ny Socialdraft, ny orinasa dia afaka manara-maso ny famerenana
newBrandAnalytics dia mandefa Pulse, Fitsikilovana ara-tsosialy amin'ny fotoana tena izy
Alakamisy, Jona 26, 2014 Alakamisy, Jona 26, 2014 Douglas Karr
newBrandAnalytics (nBA) dia nanangana Pulse, sehatra mifototra amin'ny rahona izay manampy ny mpanjifa toa an'i McDonald's, David Bridal, DICK's Sporting Goods ary Subway hahazo fahitana amin'ny fotoana tena izy amin'ny lohahevitra malaza sy resaka izay misy akony amin'ny fahitan'izy ireo ny marika sy ny vokatra. Pulse dia misy rindrambaiko fihainoana ara-tsosialy izay manangona ny hevitry ny tsirairay sy ny resaka, manome angona fironana ary mamela ny marika hihetsika amin'ny fotoana tena izy. Pulse dia manana lafin-javatra telo voafaritra tsara: ny fahitana mialoha sy ny rafitra fampitandremana - mandefa fanairana ho azy hamantatra izany ny Pulse
Fepetran'ny loharanom-baovao: Fanatsarana ny varotra ara-tsosialy sy Analytics
Talata, Desambra 4, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Source Metrics dia nanambara ny Inbox media sosialy. Ity endri-javatra vaovao ity dia tsy toy ny fitaovana hafa satria manome fampahalalana amin'ny antsipiriany azo tsaboina rehefa mitranga fa tsy faharanitan-tsaina avo lenta amin'ny tatitra isan-kerinandro na isam-bolana, ary mamela ny mpivarotra hanaparitaka 1000s ny voalaza isan'andro hatramin'ny 20 eo ho eo amin'ireo fiantsoana manan-danja indrindra azo lazaina raha manaraka. Ny Social Media Inbox dia mamela ireo mpivarotra an-tserasera hamantatra haingana izay voalaza momba ny marika misy azy ireo amin'ny media nomerika sy
Fiaraha-miasa sy fitomboan'ny lasantsy CRM ara-tsosialy
Alatsinainy, Novambra 19, 2012 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Ny CRM ara-tsosialy dia iray amin'ireo voambolana izay mirona hampiasaina sy misavoritaka. Toa saika ny orinasa rehetra manana ny fiasa ara-tsosialy dia nanomboka nanasokajy ny fampiharana azy ireo tao amin'ny tontolon'ny Social CRM. Raha ny fahitako azy dia misy endrika maromaro tsy maintsy ananan'ny sehatra sosialy alohan'ny iantsoany azy hoe CRM ara-tsosialy: fanaraha-maso - ny fahaizana manara-maso ny fiaraha-monina amin'ny fotoana tena izy ary mametraka fanairana. Famantarana - ny fahaizana misambotra ny
Fomba telo tsotra hanombohana fanaraha-maso ny marikao amin'ny Internet
Zoma Janoary 22, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Michael Reynolds
Raha nanaraka ny fironana amin'ny haino aman-jery sosialy mihitsy ianao dia mety efa naheno zavatra betsaka momba ny fidirana amin'ny “resaka” sy ny fomba fandraisana anjara. Mety efa naheno ilay fampitandremana koa ianao: "miresaka momba ny orinasanao ny olona na eo ianao na tsia". Tena marina izany ary antony lehibe hitsambikinana amin'ny media sosialy ary hanomboka handray anjara. Raha anisan'ny resadresaka ianao dia afaka mamaly ny fanontanina, manao fanaraha-maso simba, ary